ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: ပုစဉ်းရင်ကွဲ
ဟဟား ဟဟား ဟဟား ...ကြိုက်တယ်ဗျို့ ...
ပွဲသိမ်းတော့ ပွဲသိမ်း ဒါပေမဲ့ ၂၀၁၀ တော့ ဟုတ်မယ် မထင်သေးဖူး ၊ အချိန်က သိပ်ကပ်နေလို.ပါ ၊ နအဖ ကိုယ်တိုင် ရွေးကောက်ပွဲက ဘယ်ဆီမှန်း မသိသေးတဲ့ အချိန်လည်း ဖြစ်နေပါတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ လူတိုင်း (ဒီမိုကရေစီမြတ်နိုးသူတိုင်း) က လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို ၀ိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင် အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်
Confucius ရဲ့ အဆိုအမိန်.ကို ကြိုက်လို. အောက်မှာ ကူးပေးလိုက်ပါတယ် ၊
" It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop "
နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ အဆိုအမိန်.လေးတစ်ခုပါ ၊ ရေးသူကိုလည်း မမှတ်မိတော့ပါ ၊ စိတ်ထဲမှတ်မိတာ ချရေးလိုက်တဲ့ အတွက် grammar မှားခဲ့ရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ပါ ၊
End of the game, you'll see the who is the winner.
အားလုံး ကျန်းမာ ရွှင်လန်းကြပါစေ ၊
မငယ်နိုင်ဘလောဂ်ထဲက ကော်မန်လေးတခု ကိုပေါလည်း သိသင့်မယ်ထင်လို့ .. ပြီးတော့ နောက်ထပ် ထပ်ရောက်ဖြစ်မယ်ထင်လို့ .. ဝေမျှလိုက်ပါတယ်... (မဆိုင်တာ Share မိလို့ Sorry)
Naing Linn Said
ဘယ်ဘလောဂ့် ဘယ်လင့် ဆိုတာ ကျနော် မပြောတော့ပါဘူး.. ဒါပေမဲ့ ကြုံကြိုက်တုံး တခုလောက် ဥပမာပြချင်ပါတယ်.. ဘလောဂ်ဂါ တချို့ အပါအ၀င် တော်တော်များများဟာ ဘုရားဟောတဲ့ ကာလာမသုတ်ကို နားလည်မှု လွဲနေတာ ၀မ်းနည်းစွာ တွေ့ နေရပါတယ်.. ကာလာမသုတ် မှာ ဘုရားဟောတဲ့ ရှေးအစဉ်အဆက်က လက်ခံခဲ့လို၊ မိဘက ဆရာသမားက ယုံကြည်လောက်တဲ့ သူက ပြောလို့နောက်ဆုံး ငါဘုရားက ဟောလို့ ဆိုပြီးတော့တောင် မျက်စိမှိတ် မယုံကြည်လိုက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကျင်ကြံပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သိမြင်ပြီးမှ မှန်တယ်ဆိုမှ လက်ခံဖို့ ဟောခဲ့တာဟာ.. ဘာသာခြား မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေ ဗုဒ္ဓဘာသာကို သက်ဝင်မယုံကြည်သူတွေ ကို အစမ်းသပ်ခံနိုင်တယ်ဆိုပြီး စိန်ခေါ်တာပါ..
ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို ဝေဖန်ဆန်းစစ်ခွင့်မပေးပါဘူး၊ သဒ္ဓါရှိသည်အလျှောက် ဒါနနဲ့ တန်သူကို ဒါန သီလနဲ့သင့်တော်သူကို သီလ၊ ဥာဏ်ကြီးသူ၊ပါရမီဓါတ်ခံရှိသူတွေကို ၀ိပဿနာ ဘာဝတရား အစရှိသည့်ဖြင့် ကျင်ကြံပွားများဖို့ ပဲဟောပါတယ်။
အကယ်၍ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုသာ ဝေဖန်ဆန်းစစ်ခွင့် ပေးပြီး အမှားလိုက်ရှာ ခွင့် ပေးထားပါက ဒီတရားများတွေကို ဘယ်အချိန်သွားကျင့်ပါမလဲ၊။
တရားတော်အပေါ် သံသယရှိတာဟာ သဒ္ဓါ(ယုံကြည်သက်ဝင်မှု) ရဲ့ဆန့် ကျင်ဘက် ၀ိစ္ဆကိစ္စ ၊ (ရတနာသုံးပါးအပေါ်မှာ ယုံမှားခြင်း) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး အကုသိုလ်တရားပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ယုံမှားခြင်း၊ အမှားရှာ ဆန်းစစ်ခြင်းကင်းပြီး၊
သာသနာတွင်းတရား အစစ်အမှန်များ လိုက်စားနိုင်ကြပါစေ။
Dear Ko Paw
Thanks for ur highlighted poem composed by Hninkharmoe that's one of the great ones what I felt it. Salute to Ko Hininkharrmoe and I hv kept his blog in my favourite blogs. Thanks again.
( လူဆိုတာ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ထားပြီး အလုပ်လုပ်တတ်ကြတာ သဘာဝမို့ ပန်းတိုင်မရှိတာနဲ့ စာရင် ကောင်းတယ်ပဲ ပြောရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တနှစ်တခါဆိုသလို ဒီနှစ်ထဲမှာ “ပွဲသိမ်းတိုက်ပွဲ” ဆင်နွှဲမယ်လို့ အချိန်မှန်မှန်ကြီး ပြောလာခဲ့ကြတာတွေကို တွေ့ရတော့ နှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါ အဲဒီစကားမျိုးဟာ ပြောဖန်များလေ အနှစ်သာရ ကင်းမဲ့လေ ဖြစ်လာတော့တာပေါ့။ )
ကျနော်က ဦးသန်းရွှေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို အဝေးကလူတွေကို ဝေဖန် ထောက်ပြတဲ့ အလုပ်မျိုးကို မလုပ်ပါဘူး။ မိမိအသိုင်းအ၀န်းထဲမှာရှိနေတဲ့ လူတွေကိုပဲ ပြုပြင်ပါတယ်။ ဝေဖန်ပါတယ်။ တံငါနားနီး တံငါ။ မုဆိုးနားနီး မုဆိုးဆိုသလိုပဲ ကျုပ်တို့ လူ့ဘောင်ထဲက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေ ကောက်ကျစ်နေတာ မြန်မာ့လူ့ဘောင်မှာ တာဝန်အများကြီးရှိတယ်လို့လဲ ခံယူပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုပေါကို ဝေဖန်ပါတော့မယ်။
တကယ်တော့ ဒီမိုသမားတွေလည်း ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ဘယ်လို ဖြုတ်ချရမလဲဆိုတာ သူတို့လဲကြံရာမရဖြစ်နေပါတယ်။ လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့လူတွေကို ဖြုတ်ချဖို့ လမ်းစဉ်ကို ရှာဖွေလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ “ပွဲသိမ်းတိုက်ပွဲ ဆိုတာကလဲ သူတို့အနေနဲ့ ဘာမှ မလုပ်ပဲနေတာထက် တစ်ခုခုတော့ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ လုပ်ကိုင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘာမှမကူညီပဲ ဘေးကနေ လက်ပိုက်ကြည့်ရင်း ဝေဖန်ရတဲ့အလုပ်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လွယ်ကူဆုံးအလုပ်ပါပဲ။ ဒီတော့ဗျာ။ ကိုပေါ ဝေဖန်သလို ဒီမိုသမားတွေ လုပ်ဆောင်ချက်မှားယွင်းတာ မှန်တယ်။ ဒီမိုသမားတွေကလည်း တခြားဘာလုပ်ရမှန်းမသိလို့ အဲဒါကိုလုပ်နေတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ဗျာ . . . သူတို့တွေ ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဆိုတဲ့ အကြံလေးပါ ဆောင်းပါးထဲမှာ ရေးပေးပါလား။ မိမိက ဘာမှ မကူညီပဲ ဘေးကနေ လက်ပိုက်ကြည့်ရင်း ဝေဖန်အပြစ်တင်နေရင်တော့ . . . တကယ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကို စော်ကားရုံသက်သက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။
အိုင်ဒီယာက တူသလိုလိုနဲ့မတူ၊ စိတ်ဝင်စားလို့